Loaders Loaders, Loaders Front End, Loaders Wheel Compact - Jufenglong
isniin-jimco: 10 subaxnimo - 7galabnimofadhiday - cadceed: 10am - 3pm
Forklift Dhul Qallafsan
Is Loading fiicni la taaban karo
waa shirkad ku takhasustay soosaarida xamuulka iyo gawaarida isku dhafka ah ee is-quudiya.
LEHMAN alaabooyin taxane ah oo xamuul culus ah, oo isugu jira kuwa gudaha iyo kuwa caalamiga ahba, isla markaana tayo wanaagsan leh, oo la isku halleyn karo, waxay buuxineysaa shuruudda bina-aadamnimada ， waxay hormarisay xafiisyo ka badan 10 dal oo adduunka ah, badeecooyinkeedana waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 20 dal iyo gobollo sida Hindiya. , lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia iyo Brazil.
Shirkaddu waxay leedahay awood dhammaystiran oo xoog leh, waxay isku daraysaa cilmi-baarista iyo horumarinta wax soo saarka, wax soo saarka, iibka iyo adeegga, waxayna hoggaanka u haysaa helitaanka soo saarista qalabka gaarka ah iyo rukhsadaha wax soo saarka iyada oo loo marayo eu CE certificatin, ISO9001 shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah.
Gawaarida gawaarida isku dhafan
Badeecadani waxay beddeli kartaa aaladda koronto-dhaliyeyaasha, kuwa wax rarta, kuwa wax shiida iyo booyadaha. Sidoo kale in kabadan lix shaqaale ah, waa jiil cusub oo soosaara warshado dhismeyaal ah. Taangiga waxaa loo rogi karaa 270 digrii oo aan lahayn dhinacyo dhimanaya oo sedex dhinac ah.
Meel la xoojiyay, xarunta culeyska loo qaybiyo waa macquul, awood xambaarsan xoog.
wax soo saarka waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 20 dal iyo gobol sida India, lran, Russia, Libya, Vietnam, Tanzania, South Africa, Ethiopia iyo Brazil.
Qalabka alxanka tooska ah ee loo yaqaan 'robot alxanka' si loo hubiyo tayada alxanka, isku dheelitirka lebbiska wanaagsan, alxanka adag.
shirkaddu waxay soo bandhigtay Jarjar Jarmal buuxa oo otomaatig ah oo Laser ah iyo qalab faaruq ah iyo qalabka robotka alxanka ah ee Jarmalka ah ee Jarmalka ah.
sano oo waayo aragnimo ah
alaab tayo leh
Is-Loading Mashiinka la taaban karo ee aan awoodin ...
26 Nof, 20
Iskudhaf Iskudhaf ah oo Iskudhaf ah oo aan ladiidi karin Sannadihii ugu dambeeyay ee mashaariicda injineernimada, Isuduwaha Iskuduwaha Iskuduwaha ah ayaa sii kordhaya. Hadday ahaan lahayd magaalooyinka, magaalooyinka, ama ...
Ma ogtahay lixda talo si aad u noqotid qof wanaagsan ...
Hawl wade wanaagsan oo loo yaqaan 'End End Loaders' wuxuu si cad u garan karaa sida loo isticmaalo mashiinka marka uu wado fuuliyaha, yareynta duugista mashiinka, yareynta isticmaalka shidaalka, iyo inuu si dhakhso leh oo wanaagsan u dhammaystiro shaqada. Raadiyaha ...
Xiiso u leh LENMAN?
Waxaa jira in ka badan 80 shaqaale farsamo oo isugu jira kuwa dhexe iyo sare, inka badan 700 oo shaqaale ah, iyo kooxda cilmi baarista ee cilmiga sayniska ayaa xaqiijisay cilmi baarista iyo horumarka madaxa banaan ee shirkadda, gaar ahaan wada shaqeynta muddada dheer ee jaamacadaha iyo caqabadaha jaamacadeed, tayo sare leh. kooxda ganacsiga ayaa la dhisay.
HALKAN KU QAADO
Hal-abuurnimadu waxay bedeshaa erayga, tayada ayaa mustaqbalka abuurta! Shan Yi mashiinada LTD, oo ku yaala Laizhou, gobolka Shandong, waxaa la aasaasay 1990s S. Shirkadu waxay daboolaysaa aag 4000 sqm ah waxayna leedahay aqoon isweydaarsi wax soo saar modem ah 20000 sqm oo wadar ah maalgashi dhan 200000000 yuan, waa shirkad ku takhasustay soosaarida xamuulka qaada iyo gawaarida isku dhafka ah ee is-quudiya. Waxay soo saartaa 50000 xamuul iyo 8000 oo gawaari isku dhaf ah oo is-quudiya
Shanyi Lehman Waxyaabaha Wax Soo Saarka
14 Agoosto, 20
Gawaarida Iskudhafka Iskuduwaha ah, Mashiinka Mashiinka Ku shubaya La taaban karo, 2021d Gawaarida Gawaarida, Loaders Isukeenka Compact, Adduunyada Ugu Weyn ee Dhamaadka Dambe, Giraangiraha Giraangiraha,
Cinwaanka: Shahe Industrial Park, Laizhou City, Gobolka Shandong